Sida loo Beddelaan MP4 in iPod Video si fudud oo dhaqso
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in iPod Video si fudud oo dhaqso
Ay ku guuldareysato inay ka ciyaaro qaar ka mid ah videos MP4 aad iPod? Waa qaab socon iPod ah arrinta. Dhab ahaantii MP4 waa qaab weel la codecs kala duwan ah. Codes aad MP4 aan la suppported karo by iPod. Halkan waxaan ku siin doonaa xal hal-stop ah in dhib-laayey oo dhan arrimaha aad qaab incompatibility la video Converter awood badan. Waxaa qoreysa on awood diinta ka awood badan leh xawaaraha qabanin iyo xog.
Qeybta 1: Best MP4 in iPod Converter for Windows / Mac
Qeybta 2: MP4 Free in iPod Converter
Qeybta 3: MP4 Online in iPod Converter
Qeybta 1: Best MP4 in iPod Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Beddelaan MP4 si toos ah iPod la presets filaayo.
• Taageerada 150+ qaabab loo jecel yahay diinta oo ay ku jiraan AVI, MKV, MP4, iwm
• jeeda music Macdan filimada, iyo sidoo kale aad jar kartaa files warbaahinta.
• Gubashada video ama music inay DVD wax qaybsi fiican ama waayo-aragnimo loo maqli karo.
Sida loo badalo MP4 in iPod
Just download iyo rakibi MP4 si iPod Converter daaqado (Windows 10 ka mid ah). Sidoo kale waxa ay taageertaa Mac. Tutorial faahfaahsan waa halkan .
1. Ku dar files MP4 galay MP4 si Converter iPod
Haddii aad hesho files MP4 dhow dahay, si fudud kuwaa daaqaddii barnaamijka. Haddii aan, guji "Beddelaan" tab> "Add Faylal ay" si ku shuban ah videos MP4 caga ka disk adag ama qalabka la qaadi karo. Haddii aad leedahay labo ka mid ah files MP4, iyaga wada shuban ah si loo badbaadiyo waqtiga iyo sahlo diinta.
2. Dooro qaab wax soo saarka aad rabto in aad ku
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad si ay u helaan wax soo saarka liiska format. Markaas iPod dooran ka Apple qaab submenu (presets lagu daydo oo kala duwan ayaa laga heli karaa, kaliya dooran wax kasta oo socota illalintanada si aad doon).
Waxaad astaysto bitrate wax soo saarka, heerka jir, xallinta, codec, iwm keligaa, riix doorasho "Settings" si ay u helaan suuqa kala goobta.
Hawlaha Common tafatirka laga heli karaa: dalagga, saamayn, watermark, iyo subtitles (guji ah "Edit" button image dhinaca gacanta midigta oo video kasta item).
3. Start MP4 in ay diinta ka iPod
Marka waa jidkii aad jeclaan, guji "Beddelaan" button. Barnaamijkan waxa aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka idin tusin doonaa boqolkiiba iyo waqtiga soo hadhay.
Marka dhan laga badalay oo dhameystiran, waxaad soo dhoofsadaan kartaa gediyay videos in Lugood aad. Iyaga u hagaagsan in iPod, ka dibna ay awoodaan in ay mar walba iyaga u ciyaaro, meel kasta oo aad tahay. Fadlan ku raaxaysan!
Daawo tutorial video hoose ee ku saabsan sida loo badalo MP4 in iPod for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in iPod Converter
Wondershare MP4 Free in iPod Converter lacag la'aan ah karo badalo MP4 in iPod, edit video la function awood video tafatirka, oo kala soo bixi YouTube videos.
Pro: dhamaystiran freeware, oo isu
1. No filaayo in presets u MP4 in ay diinta ka iPod.
2. Tayada Output video ma u fiican yahay sida Video Converter Ultimate.
3. Burnning DVD aan la taageeray.
Haddii aad dooni qalab diinta video boosaska badan oo u baahan in la helo tayada wax soo saarka fiican. Isku day Wondershare Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Sida loo Beddelaan MP4 si iPhone
AVI Player u iPhone: Sida loo Play AVI on iPhone
Sida loo rogo ama Guba iyo MP4 in DVD ee Mac / Win
Sida loo Play Quicktime MOV Files on TV (Samsung TV Mid)
Sida loo Play AVI on Android Phone
Ma ku dari kartaa MP4 / MPEG in Lugood? Xalliyo.